jeudi, 05 septembre 2019 21:17
Ampefiloha Ambodirano: Taovan-kena milanja 27 taonina saika haondrana any ivelany
« Soucrils» sy vorivorin-kena milanja 27 taonina no tratra tamina teratany sinoa tetsy Ampefiloha Ambodirano, Antananarivo izay saika haondrana any ivelany.
Nandritra ny fisavana notanterahin'ny avy ao amin’ny sampana fikarohana heloka be vava, eo anivon’ny Zandarimaria Nasionaly eo Fiadanana, sy ny avy ao amin’ny Minisitera ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono (MAEP), teny an-toerana androany alakamisy 05 septambra 2019 no nahitana ireo taovan-kena ireo, niainga tamin'ny fanomezam-baovao avy amin'ny olona tsara sitrapo.
jeudi, 05 septembre 2019 19:24
Kitra-Barea CHAN: Hijanona hanoman-tena eto Madagasikara
Na efa nanome tsodrano ireo mpilalao hiazo an'i Afrika Atsimo aza dia niverina tamin'ny fanapahan-keviny ka namoaka fanambarana ny Federasiona Malagasy ny baolina kitra (FMF), fa tsy afaka ny hiazo an'i Johannesburg Afrika Atsimo hiatrika lalao ara-pirahalahiana araka ny fanasan'ny Bafana Bafana ny ekipam-pirenena Malagasy Barea CHAN, noho ny zava-mitranga ao Afrika Atsimo tsy ahazoana antoka ny fandriampahalemana sy ny fiarovana ny mpilalao sy ireo mpanohana.
Hijanona hanoman-tena eto Madagasikara ny Barea CHAN hoy hatrany ny fanambarana.
jeudi, 05 septembre 2019 19:20
Fantatrao ve: Iza moa Pape François?
Ny Pape dia filohan'ny Fiangonana Katolika, nandimby an'i Masindahy Piera, izay nanankinan'i Jesoa Kristy ny Fiangonana, sy ampahafantatra an'izao tontolo izao ny tenin'Andriamanitra, ampihely ny Vaovao Mahafaly anatin'ny Evanjely, hanohy ny asa nataon'i Jesoa Kristy, ary hijoro vavolombelona tamin'ny nitsanganany tamin'ny maty, nandreseny ny fahafatesana amin'ny maha zanak'Andriamanitra azy, ka hitondra ny famonjena ho an'ny rehetra.
Ny Pape izany dia dimbin'ny Apostôly, izay midika hoe "Iraka", toa an'i Jesoa Kristy nirahin'Andriamanitra ho ety an-tany hamonjy ny olombelona. Amin'ny maha "Iraka" azy izay, dia misy ny Fanirahana, na ny Sakramentan'ny Filaharana (Sacrement de l'Ordre), izay nomen'i Kristy an'i Masindahy Piera mpianany, ary nafindran'i Piera niampita tamin'ireo Pape filohan'ny Fiangonana Katolika nifanesy.
Jorge Mario Bergoglio no anarany, 82 andray 83 taona izy, teraka tamin'ny 17 desambra 1936 tany amin'ny tanàna mahantra Flores any Buenos Aires, Argentine.
Zanaky Mario Josè Bergoglio, mpifindra monina italianina avy any Piémont ny rainy, ary Régina Maria Sivori, teraka tao Argentine, fa zanaka mpifindra monina italianina ihany koa ny reniny, izay avy any Ligurie.
jeudi, 05 septembre 2019 12:02
Morondava: Fonosan-drongony maromaro saron’ny Polisy
Tra-tehaka niaraka tamin’ny fonosan-drongony maromaro tao amin’ny Fokontany Tanambao, Kaominina ambonivohitr’i Morondava, renivohitry ny Faritra Menabe i Pola, 30 taona.
jeudi, 05 septembre 2019 11:57
Kitra - Barea CHAN: Handrato lalao ara-pirahalahiana atsy Afrika Atsimo
Hiazo an’i Afrika Atsimo, hiatrika lalao ara-pirahalahiana amin’ny Bafana Bafana afrikana tatsimo ny ekipam-pirenena malagasy Barea CHAN. Hotanterahina ao Johannesbourg amin’ny 7 septambra 2019 ny lalao.
Nitso-drano ny Barea CHAN ny filohan'ny Federasiona malagasy ny baolina kitra, Rabekoto Arizaka Raoul, androany.
jeudi, 05 septembre 2019 11:49
Fiaraha-miasa ara-tafika: Hanao fanazarantena sy sarin'ady ny Tafika Malagasy sy Koreana Tatsimo
Hanao fanazarantena amin'ny hai-ady « tae kwondo » ny eo anivon'ny Tafika Malagasy, ary hotanterahina ihany koa ny sarin’ady, iarahan'ny Tafika an-dranomasina sy ny sambo mpiady Koreana «destroyer» iray, ao Toamasina ny 19 sy 20 septambra izao.
jeudi, 05 septembre 2019 11:42
Fangerena ankalamanjana: Mbola manana taha avo ny Faritra Vatovavy Fitovinany sy Atsimo Atsinanana
Nisy ny 03 septambra teo ny fifanaovan-tsonia famatsiam-bola mitentina 2,5 tapitrisa dolara niaraka tamin’ny fanjakana koreanina sy ny UNICEF, ho an’ny tetikasa entina hanatsarana ny lafiny fanadiovana ho an’ny olona 380 000.
Tetikasa izay ahafahan’ny Ministeran’ny Angovo, ny Rano ary ny Akoranafo miasa any amin’ny Faritra Vatovavy Fitovinany sy Atsimo Atsinanana ao anatin’ny roa taona, izay amin'ireo faritra ireo mbola manana taha avo amin’ny fangerena ankalamanjana amin’izao taona 2019 izao.
jeudi, 05 septembre 2019 11:40
05 septembre: Journée internationale de la charité
jeudi, 05 septembre 2019 11:31
05 septembre: Journée internationale du Blessé Médullaire
Un traumatisme médullaire ou traumatisme de la moelle épinière (ou moelle spinale) met en jeu le pronostic vital immédiat ou retardé. Il est à l'origine de troubles moteurs et sensitifs, et de troubles des fonctions neuro-végétatives.
jeudi, 05 septembre 2019 11:30
Tsena sy fanjifana: Niaka-bidy ireo entana ilan’ny mponina andavanandro
Nisy fiakarany manodidina ny 10% eo ny vidin’entana eny an-tsena. Voakasik’izany ireo entana ilain’ny mponina andavanandro, eny hatramin’ireo fitaovana fanaovan-trano aza. Tsy misy fanazavana mazava ny anton’io fiakaram-bidy io ; ny solika rahateo tsy niova ny vidiny tato anatin’ny roa volana sy tapany izao, ny sandan’ny vola vahiny ihany koa tsy dia nisy fiovana firy.
Nodinihina manokana nandritra ny filankevitry ny minisitra omaly io tranga io. Nanipika manokana ny tsy maintsy handraisana fepetra mikasika ny fanararaotana ny fampiakarambidy ny entana ilaina andavanandro eny an-tsena ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina, araka ny fampitam-baovao nomena ny mpanao gazety.
Hisy fitsirihina ireo mpanafatra entana, ka arahi-maso ny tahirin'entana ary angataham-panazavana izy ireo ny antony fiakarambidy, nefa mbola tsy miditra fotoanan'ny maitso ahitra isika. Ilaina koa ny manaja ny fitsipiky ny fifaninanana madio mba ho tombontsoan'ny mpanjifa.